Mpikatroka Syriana: Tokony Hatsahatra Ny Herisetra Atao Amin’Ireo Mpiasan’ny Media · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Desambra 2013 12:01 GMT
Mampiaka-peo ny fikambanan'ny media ao Syria ho fanoherana ny fitomboan'ny herisetra ataon'ny vondrona djihadista amin'ireo mpanao gazety ao amin'ny firenena. Taorian'ny fihoaram-pahefana vao haingana nataon'ny Fanjakana Islamika ao Irak sy Syria ( ISIS ), nanatontosa hetsika mitaky ny fampitsaharana ny herisetra mihatra amin'ireo mpiasan'ny media Syriana ireo vondrom-pisoloana vava ao Syria sy manerantany.
Sahiran-tsaina tanteraka ny mpikambana ao amin'ny Global Voices Advocacy manoloana ireo fandrahonana sy fanitsakitsahana ny fahalalaham-pitenenana ataon'ny vondrona mahery fihetsika mibodo ireo faritra afaka amin'ny fifehezan'ny fitondrana ao Syria. Na dia malaza aza ny fomba amam-panaon'ny fitondrana syriana amin'ny sivana, ampihimamba amin'ireo fotodrafitrasan'ny fifandraisana, ary ny famoretana ireo mpanao gazety sy mpikatroka amin'ny media, dia ahitana fironana mampahonena ihany koa ankehitriny ny fanitsakitsahana ny fahalalaham-pitenenana ao amin'ireo faritra antsoina hoe “afaka”.
Miaraka amin'ireo fikambanana hafa ao an-toerana sy fikambanana iraisam-pirenena izahay amin'ny fitakiana ny fanohanana ny fahalalahan-gazety sy ny fahalalaham-pitenenana, ny famotsorana ireo gadra ary ny fampitsaharana ireo heloka sy herisetra ataon'ny ISIS ao Syria. Eo an-dalana ankehitriny ny fanentanana ao amin'ny freepressforsyria.com .
FANAMBARANA AO AMIN'NY FANANGONAN-TSONIA: FAHALALAHANA HOAN'NY GAZETY AO SYRIA.
Tamin'ny tatitra farany, nosokajian'ny “Reporters sans frontières ho “firenena mampidi-doza indrindra ho an'ny mpanao gazety” i Syria.” Lasibatra voalohan'ny fitondrana sy ny mpitandro ny filaminana hatramin'ny taona 2011, ary miatrika fandrahonana ho faty tsy an-kiato avy amin'ny milisy djihadista ankehitriny ireo mpanao gazety syriana nanomboka ny taona 2013.
Miatrika famoretana raha vao mitabataba sy miampanga fihoaram-pefy, ary miatrika faharinganana raha tsy izany, aleon'ny media syriana misafidy ny voalohany. Na dia eo aza ny fampitahorana sy ny fandrahonana, sambany miray hina ireo media syriana ary miara-mitsangana mba hitaky ny fampitsaharana ny heloka atao amin'ireo mpanao gazety rehetra. Mbola tsy nisy toy izany teo aloha ary mety hitondra hoany amin'ny fanovana tena izy izany. Ity firaisankina ho amin'ny fahalalahan-gazety sy ny fanoherahana ny tsi-fahazakana ity no mety ho otrikafo mitarika ny fihetseham-bahoaka lehibe.
Na dia izany aza, miatrika loza goavana ny media syriana amin'ny fanaovana izany, ary rehefa mahazo fanohanana ampy avy ao an-toerana sy iraisampirenena ihany ry zareo vao mety hisy fiantraikany hampisy ny fahasamihafana ny ataon-dry zareo.
Hiangaviana indrindra ianao mba hanasonia ny fitakiana ho fanohanana ireo media syriana mitsipaka ny isafidianana amin'ny fitondrana mpamono olona na ireo islamista mahery fihetsika tsy mahazaka ny hevitra hafa, ka mampiseho ny mety hisian'ny safidy fahatelo, sady tsy ao amin'ny fitondrana syriana no tsy ao amin'ny milisy djihadista.
Raha hanasonia ny fitakiana, tsidio ny Avaaz.org. Misy amin'ny teny Arabo, Anglisy, Frantsay, ary Italiana ity fanangonan-tsonia ity.
Fitantarana hafa momba ireo herisetra mihatra amin'ny mpiasan'ny media ao Syria.
No Man's Land: Kindapping Journalists Worsens in Syria (Miharatsy ny fangalàna an-keriny mihatra amin'ireo mpanao gazety), Global Voices
Syria: A Bermuda Triangle for Journalists (Toram-panjavonan'ny mpanao gazety), Syria Untold